London: Yaa la Aaminaa! – Rasaasa News
Madaxda degaanka Somalida Atoobiya oo labo iyo toban maalmood [12 maalmood] ku sugan Magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa laga hayaa “hadaba ayaan aaminaa.”
Madaxwaynaha ayay ka luntay ujeedadii socdaalkiisa ee Ingriiska, ka dib kolkii uu la kulmay dabeecado uusan waligii ku arag degaanka Somalida.
Madaxwaynaha oo tan iyo intii uu tagay Ingriiska la kulmayey dad kala duwan, ayaa kala garan waayey cida taageersan maamulkiisa iyo cida ka soo horjeeda, waayo kuli dadku waxay ka yimaadeen degaanka, waana dhalyo.
Waxaa lagu arkay shirkii London, in labo ruux oo wada dhashay midna banaanbaxayey midna shirka Safaarada joogay. Kolkii ay dhamaatay arintuna labadii ruux israaceen mid walinba ka sheekeeyey wixii uu la kulmay, iyaga oo istusaya waxa wanaagsan.
Arintani waxay ka dhacdaa degaanka, sida in labo ruux oo wada dhashay midna Liyuu Boolis yahay midna ONLF, laakiin laggama yaabo in wada hadal iyo sheeko midna dhex marto.
Madaxwayne Cabdi waxa uu la yaabay, waxay ahayd in dad banaanbixii laggaga horjeeday isaga ku jiray ay maalintii dambe soo raaceen dad eheladood ah, lana kulmeen madaxwaynaha, iyaga oo wali aaminsan ONLF, sidaasna uu ku qaabilay. Meesha dadka degaanka ee lagu tuhmo in ay taageeraan ONLF la xidho.
Dadka taageera ONLF-ta, ee arkay madaxwaynaha ayaa laftigoodu yaabay, waayo waxay filayeen in uu nici doona ama uu si kale ula dhaqmi doono.
Madaxwaynaha ayaa yidhi “eega sidee la idiin kala garan kiina xun iyo ka wanaagsan.” Arintaas waxaa ugu wacan dalalka horumaray oo ogol in labo feker oo kala jeeda wada sheekaysataan, madaama uusan meesha soo galayn dil iyo gacan qaad midna.
Arinta ka dhacday London, waxaa laga yaabaa in ay wax badan ka badasho, dabeecada lagu dhaqo dadka degaanka, taas oo ah in ruuxii laggaga shakiyo tageerada ONLF la xidho, waayo shakiga ayaa ah qodob dambiyeed ka hirgalay degaanka.
Waxaa la yidhaahdaa “xooluhu urtay isku garataan dadkuna hadalka.” Dhab waxaa ah in kolka la wadahadlo wax uun lagu heshiin, iyada oo la eegayo danta guud. Hadii aan la heshiina waxaa la kala faa,iidaa waxyaabo badan oo ka maqan labada dhinaca ee ishaya.
Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Xuseen [cali-dheere], oo ay Gacanta ku Dhigtay Atoobiya.